Maxeysan U Wanaagsaneen In Aad Ku Hurado Tintaada Oo Qoyan?#Waa Tan Sababta | Xaqiiqonews
HealthyMaxeysan U Wanaagsaneen In Aad Ku Hurado Tintaada Oo...
Maxeysan U Wanaagsaneen In Aad Ku Hurado Tintaada Oo Qoyan?#Waa Tan Sababta
Habeenkii oo la dhaqdo timaha waxay badbaadin kartaa waqti badan oo qaali ah oo kaa bixi lahaa subaxdii, taasina waa sababta gabdha badan u seexdaan timahooda oo qoyan.
Dhaqankani ma ahan mid u fiican caafimaadka, waxaana laga yaabaa in uu keeno arimo badan oo ciribtooda dambe aan la mahadin.
Qoyaanku wuxuu soo jiitaa noocyo kala duwan oo ah jeermisyo iyo noolayaal, wuxuuna kor u qaadaa dhalashadooda iyo koritaankooda. Qofku wuxuu ku xanuunsan karaa cayayaanka ka dhasha hurdada lagu seexdo timaha qoyan. waxay keeni kartaa xasaasiyad xoog leh, oo saameyneysa maqaarka iyo habka neefsashada.
Timaha Qoyaankooda waa uu sii bataa Huradad dhaxdeeda, taas oo keeni karta gubasha xoqan oo ku timaato timaha. Sababtaas awgeed, gubashada waxa ay maqaarka u keeni kartaa, jirro, cuncun iyo xanuun. Qabowgu wuxuu sababi karaa barar cunaha, dhegaha, sanka iyo sinaha.
Khubarada ayaa tilmaamaya in tiro badan oo bakteeriyadu ay ku urursan yihiin gogosha iyo barkimada, ayna bilaabayaan in ay si wax ku ool ah ugu tarmaan jawiga qoyan. Shukumaan qoyan ama timo qoyan ayaa abuuraya jawi ku habboon koritaanka bakteeriyada waxyeellada leh, taasoo keeni karta caabuq.
Maqaarka madaxa , waxa ay wax yeelo ka soo gaari kartaa hurdo leh timo qoyan ,in la daweeyo dhibaatadan waa mid aad u adag, sidaas darteed waa in laga hortagaa cudurkan iyadoo la iska ilaalinaayo, hurada timaha qoyan.